San Htun's Diary: အလုပ်ရှာခြင်း အနုပညာ - ၄
နိုင်ငံခြားသားအလုပ်သမားတွေပေါ် မှီခိုနေရတဲ့ စင်္ကာပူမှာတော့ အလုပ်ဗီဇာက လွယ်တယ်။ အလည်ဗီဇာနဲ့ လာ အလုပ်ရှာ၊ အလုပ်ရရင် အလုပ်ရှင်က ဗီဇာလျှောက်ပေး လစာပေါ် မူတည်ပြီး Work Permit ၊ S Pass ၊Employment Pass ချပေးပါတယ်။ ကိုယ် ATH မှာ အလုပ်ရတော့ အင်တန်းမဆင်းခင်ကတည်းက ကျောင်းကပေးထားတဲ့ ပီအာအော်ဖာလက်တာနဲ့ပီအာလျှောက်ပါတယ်။ ရုံးက လုပ်ပေးသွားတော့ ဘယ်လောက်ကုန်တယ်၊ ဘာစာရွက်စာတမ်းတွေ တင်ရတယ်၊ ဘယ်လိုလုပ်ရတယ်ဆိုတာ လုံးဝကို မသိတာ။ ၂၀၀၇ လောက်က ပီအာလျှောက်တဲ့သူတိုင်း ပီအာရတယ်။ နိုင်ငံခြားသားတွေက စီတင်ဇင်တွေရဲ့အလုပ်တွေကို လုယူနေပါတယ်ဆိုပြီး စီတင်ဇင်တွေကအော်၊ ၂၀၀၈ စီးပွားပျက်ကပ်ဆိုတော့ ကိုယ်ပီအာလျှောက်တဲ့ ၂၀၀၉ မှာ ပီအာအတော်ကျပ်နေပြီ။ ပီအာရီဂျက် အီးပီပဲ ချပေးတယ် gold metal ရတဲ့သူ၊ ကိုယ့်ထက်တော်တဲ့သူတွေ၊ ကိုယ့်ထက် လစာကောင်းတဲ့သူတွေတောင် ရီဂျက်ဆိုတော့ ပျော်စရာကြီးဟေ့ တပျော်တပါး ရီဂျက်ထိကြတာ။ တချို့ တရုတ်နဲ့ အိန္ဒိယကျောင်းသားတွေ ပီအာရတယ်လို့ကြားတယ်။ ယူအက်စ်မှာ အလုပ်လုပ်တဲ့ နှစ်နှစ်က အင်တန်းဆင်းတယ်လို့ ပြောရမလား အဝေးသင်တက်ပြီး full time အလုပ်လုပ်ရတာ ဗီဇာကတော့ ကျောင်းသားဗီဇာပါ။ အချိန်ပြည့် အလုပ်လုပ်ပြီး အဝေးသင်တက်ရတာ campus မှာ full time အချိန်ပြည့်ကျောင်းသား လုပ်ရတာထက် ပိုပင်ပန်းတယ်။ အိတ်ခ်ျဝမ်းဘီလျှောက်မယ်ဆိုတော့ ကိုယ့်ရုံးက စာရွက်စာတမ်းပဲ ပေးတာ ရှေ့ နေငှားခ၊ အစိုးရကို ပေးရငွေတွေကို ကိုယ့်ဘာသာ ပေးရမှာတဲ့။ ရှေ့ နေကတော့ ကိုယ်တို့ ရုံးက လက်စွဲတော် တရုတ်ရှေ့ နေနဲ့လုပ်ပါတယ် ရှေ့ နေခက ၁၅၀၀။ ဒီ့ထက် ဈေးသက်သာတဲ့ ရှေ့ နေတွေ ရှိပေမဲ့ သေသေချာချာ လုပ်ပေးပါ့မလား စိတ်ပူရမယ်။ ဒီရှေ့ နေကတော့ ကိုယ်တို့ ရုံးက အကုန်လုံး ဒီရှေ့ နေနဲ့ ပဲ လျှောက်ကြတာဆိုတော့ သူ့ ကိုပဲ ရွေးလိုက်ပါတယ်။ သူ့ ထက် ဈေးကြီးတဲ့ရှေ့ နေတွေလည်း ရှိပါတယ်။
H1B Filling fee က အနှေးအမြန်ပေါ် မူတည်ပြီး ဈေးကလည်း ၁၅၀၀ ကနေ ၂၅၀၀ ကြားရှိပါတယ်။ ရှေ့ နေကို မေးကြည့်တော့ အနှေးပဲလျှောက်ပါလို့အကြံပေးတယ်။ ကိုယ့်ဖိုင်းလင်းကြေး ၂၃၅၀ ကို ကုမ္ဗဏီက ချက်လက်မှတ် ထုတ်ပေးတယ် ကိုယ်က နောက်မှ ကုမ္ဗဏီကို ပြန်ပေးရတယ်။ ကိုယ့် bachelor ဘွဲ့ က ယူအက်စ်က မဟုတ်လို့အမေရိကန်ပညာရေးအဖွဲ့ အစည်းမှာ ကိုယ်ရထားတဲ့ဘွဲ့ တွေက ယူအက်စ် bachelor ဘွဲ့ နဲ့ တူညီကြောင်း စစ်ဆေးခက ၁၅၀၊ ဖက်ဒစ်ပို့ ခ ၅၀။ ကိုယ်က ဒီအလုပ်အတွက် မရှိမဖြစ် အရေးပါတဲ့အကြောင်း စီအီးအိုလက်မှတ် ထိုးထားတဲ့ ထောက်ခံစာ၊ job description ၊ စီဗွီဖောင် စာရွက်စာတမ်းတွေက လက်တစ်ဆစ်လောက် ထူတယ်။ ရှေ့ နေက အကုန်လုပ်ပေးပါတယ် ကိုယ်က ရှေ့ နေရေးထားတဲ့ ကိုယ့်စီဗွီ၊ စီအီးအိုထောက်ခံစာ၊ job description တွေ မှန်မမှန် စစ်ရတယ်။ စင်္ကာပူမှာတော့ အလုပ်ဗီဇာတွေကို ကြိုက်တဲ့အချိန်လျှောက်လို့ ရပေမဲ့ ယူအက်စ်မှာတော့ အိတ်ခ်ျဝမ်းဘီဖောင်တွေကို ဧပြီ ၁ ရက်နေ့ မှာမှ လက်ခံတာမို့ကိုယ့် application form က အဲဒီနေ့ ရောက်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ အစိုးရက လျာထားတာက ၃ သောင်း လျှောက်တဲ့သူက တသိန်းဖြစ်နေလို့lucky draw အရင်လုပ်ပါတယ်။ အိန္ဒိယလေး ပီရက်ခ်ျက lucky draw မပေါက်ဘူး ဖိုင်းလင်းကြေး ပြန်ရပေမဲ့ ရှေ့ နေကြေး ပြန်မရဘူး။ ကို်ယ်က lucky draw ပေါက်ပေမဲ့ document မပြည့်စုံဘူးဆိုပြီး ပြန်တင်ရတယ်။ ကိုယ့်တို့ အက်ဖ်ဝမ်းကျောင်းသားဗီဇာတွေမှာ ဘာကဒ်မှ မရှိဘူး အလုပ်ရရင် ကျောင်းသားဗီဇာစာရွက်ရဲ့တတိယမြောက်စာရွက်မှာ ဘယ်ကုမ္ဗဏီ ဘာရာထူး ဘယ်နေ့ ကနေ ဘယ်နေ့ အထိ အလုပ်လုပ်ခွင့်ပြုတယ်ဆိုတာပဲပါတယ် EAD လို့ ခေါ်ကြတဲ့ ကဒ်မရှိတာကို ကဒ်တင်ပါတဲ့။ အမှန်က အဲဒီအရာရှိ ဗီဇာသဘောတရားကို နားမလည်တာပါ။ ပြန်တင်ခ ၅၀၀၊ ကုမ္ဗဏီကလည်း ပရောဂျက်၊ ကွန်းထရပ်စာချုပ်၊ ဝယ်ထားတဲ့လိုင်စင်စာရွက်တွေ အများကြီးတင်ရတယ်။ ရှေ့ နေ ကိုယ့်ကိုပြတာ တင်ရတဲ့စာရွက်ထူကြီးက ၁ လက်မလောက် ထူတယ်။ ဧပြီ ၁ ရက်နေ့ မှာ တင်လိုက်တာ အောက်တိုဘာ ၁ ရက်နေ့ မှာ result ထွက်ပါတယ်။ အောက်တိုဘာ ၁ ရက်နေ့ မတိုင်ခင် ကျောင်းသားဗီဇာကုန်သွားရင် အလုပ်လုပ်ခွင့် မရှိပါဘူး။
ကိုယ်တို့ ရုံးက အိတ်ခ်ျဝမ်းဘီ ၆ ယောက်လျှောက်တာ ၃ ယောက် ရီဂျက်ထိတယ် ကြားတဲ့နေ့ ကဆို စိတ်ပူလို့အိပ်မပျော်ဘူး။ ရီဂျက်ထိတဲ့ တရုတ်လေးက ယူအက်စ်ညပီအိတ်ခ်ျဒီဘွဲ့ ရထားတာ ၆ လသား ကလေးလေးရဲ့ဖခင် ယူအက်စ်မှာနေတာ ၆ နှစ်လောက်ရှိပြီ အလုပ်က ကိုယ်နဲ့position အတူတူ။ ဒီလိုလူမျိုးတောင် ရီဂျက်ထိတယ်ဆိုတော့ စိတ်မပူဘဲ နေပါ့မလား။ ရီဂျက်ထိရင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ ဆူနမ်တို့ နဲ့တိုင်ပင်တော့ ကျောင်းတကျောင်းရှိတယ်တဲ့ ဒယ်လားဝဲယားပြည်နယ်မှာ။ first day မှာပဲ စီပီတီ အလုပ်လုပ်ခွင့် ချပေးတယ် ကျောင်းလခက ဈေးတော့ နည်းနည်းကြီးတယ် ကိုယ်တို့ လို ဗီဇာကိစ္စအခက်ကြုံနေတဲ့ ကျောင်းသားတွေကို ရိုက်စားတဲ့ ကျောင်းဆိုပါတော့။ စနေ၊ တနင်္ဂနွေမှာ တနေကုန် ကျောင်းသွားတက်၊ ရုံးတက်ရက်မှာ အလုပ်လုပ်ဆိုတော့ ပိုက်ဆံကုန်လူပင်ပန်းပေမဲ့ ဗီဇာကြောင့်ကိုး။ အိတ်ခ်ျဝမ်းဘီ ထပ်လျှောက် အိတ်ခ်ျဝမ်းဘီရတာနဲ့ကျောင်းကိုရပ်လိုက်ပေါ့ အဲဒီကျောင်းကို ဘွဲ့ အတွက် မဟုတ်ဘဲ ဗီဇာအတွက် တက်ကြတာကိုး။ ကျောင်းကို grading ၊ transcripts တွေ လှမ်းပို့ ၊ လစာ pay stub တွေ ပို့ ပြီး ကျောင်းအပ်တော့ ရီဂျက်တဲ့။ ဟင် ငါ့ကို ဘာကြောင့်ရီဂျက်တာလဲလို့မေးတော့ GPA ၃ မရလို့ တဲ့။ ၃ မရတာ တခြားဖြေထားတဲ့ စာမေးပွဲရလာဒ်ကို မပေါင်းရသေးလို့ဒီမှာတွေ့ လား ကိုယ့်ကို ဘွဲ့ ယူနိုင်တယ်လို ကျောင်းကရေးလာတဲ့စာ။ ဆူနမ်တို့ ကလည်း အံ့သြလို့ဘာကြောင့်ရီဂျက်ပါလိမ့် ဒင်းတို့ ကျောင်းက လက်မခံလည်း ဘာအရေးလဲ တခြားကျောင်းတွေ အများကြီး။ ကျောင်းတွေ လိုက်ရှာရ၊ အဖေ၊ အမေတို့ ကို ကိုယ့်ဘွဲ့ နှင်းသဘင်တက်ဖို့ယူအက်စ်ကို အလည်ခေါ်ချင်လို့အိတ်ခ်ျဝမ်းဘီ ရပါစေလို့ဆုတောင်းရတာအမော။ စက်တင်ဘာ ၉ ရက်နေ့ မှာ ကျောင်း Placement Office ၊ Computer Professionals Career Center က ဒါရိုက်တာဂျူလီက ကိုယ် အိတ်ခ်ျဝမ်းဘီရလို့ကွန်ကရက်တဲ့အီးမေးလ် ပို့ လာတော့မှ ရှေ့ နေကိုမေးကြည့် ကွန်ဖန်းဖြစ်တော့မှ မိသားစု၊ သူငယ်ချင်း၊ မိတ်ဆွေတွေကို ဖုန်းဆက်၊ မတ်ဆေ့ခ်ျပို့အယ်မလေး ဝမ်းသာလိုက်တာ ထခုန်မတတ်ပဲ ခုမှပဲ စိတ်ဒုန်းဒုန်း ချနိုင်တော့တယ်။ အိတ်ခ်ျဝမ်းဘီကို ကိုယ် လွယ်လွယ်နဲ့ ရခဲ့တယ် မထင်ပါနဲ့အဲဒီလို စိတ်ဆင်းရဲ ဒေါ်လာ ၅၀၀၀ လောက် ကုန်ပြီးမှ ရတာပါ။
Master of Computer Science international students with principal and mayor in March 2011.
MUM, Fairfield, Iowa, USA
ကိုယ့်လက်ရှိအလုပ်က Consultant ဆိုတော့ ကလိုင်းရင်းရုံးတွေမှာ သွားထိုင်ရတယ် ပရောဂျက်တွေ အများကြီး လုပ်ရတယ်။ ကလိုင်းရင့်က Open Text ၊ Livelink ၊ Sharepoint သုံးမယ်ဆိုရင် လိုက်လေ့လာရတယ်။ ပညာတွေ အများကြီးရတယ် ကိုယ်လုပ်ခဲ့တဲ့ အလုပ်တွေထဲမှာ ဒီအလုပ်က အပင်ပန်းဆုံး stress အများဆုံးပဲ။ ကိုယ် အလုပ်ကြိုးစားတာကို အသိအမှတ်ပြုတဲ့အနေနဲ့လစာတိုးပေးတယ်၊ ဘောနပ်စ်ပေးတယ်ဆိုတော့ ကျေနပ်ပါတယ်။ ဒီကုမ္ဗဏီမှာပဲ ဂရင်းကဒ်ရတဲ့အထိ လုပ်မယ်လို့စိတ်ကူးထားတယ်။ အိတ်ခ်ျဝမ်းနဲ့ က အလုပ်ပြောင်းရတာ ခက်တယ် အလုပ်က ဖြုတ်ရင် ၊ ကိုယ်က ထွက်ရင် ယူအက်စ်မှာ ၁ လလောက်ပဲ နေခွင့်ရှိတယ်။ စင်္ကာပူမှာ SPass၊ EP တွေ ကန်ဆယ်သလိုမျိုးပေါ့။ ဒီတော့ အိတ်ခ်ျဝမ်းထရန်စဖာဆိုပြီး တခြားမှာအလုပ်ရပြီး အိတ်ခ်ျဝမ်းဘီရတော့မှ ပြောင်းကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကိုယ့်အလုပ်မှာ စိတ်ဖိစီးရင် ငါ ဂရင်းကဒ်ရတဲ့နေ့ဒီကုမ္ဗဏီကနေ ထွက်ထဲ့နေ့ ပဲလို့ကြုံးဝါးလေ့ရှိတယ်။ ခုနေများတော့ ဘယ်လောက်ပင်ပန်း စိတ်ဖိစီးပစေ မထွက်နိုင်သေးဘူး။ ယူအက်စ် မာစတာရထားရင် အိတ်ခ်ျဝမ်းဘီ ခြောက်လသက်တမ်းရှိရုံနဲ့ဂရင်းကဒ် လျှောက်လို့ ရပါတယ်။ ဂရင်းကဒ်လျှောက်ဖို့ကိုယ့်ရှေ့ နေနဲ့တိုင်ပင်တော့ အရင်ဆုံးမေးတာက မင်းဘာလူမျိုးလဲတဲ့ မြန်မာဆိုတော့ ရနိုင်ပါတယ်တဲ့။ ဂရင်းကဒ်လျှောက်ဖို့ ကုမ္ဗဏီက အရင်ဆုံး employment authorization ရအောင် လုပ်ရပါတယ်။ အလုပ်ကို သတင်းစာ၊ jobsite သုံးခုလောက်မှာ ကြေငြာ၊ အလုပ်လာလျှောက်တဲ့ အမေရိကန်စီတီဇင်၊ ဂရင်းကဒ်တွေက အရည်အချင်းမပြည့်မှီ ကိုယ်ကမှ အရည်အချင်းပြည့်မှီလို့ဂရင်းကဒ်လျှောက်ပေးချင်တဲ့အကြောင်း၊ အင်တာဗျူးတာတွေ အပြည့်အစုံ တင်ရပါတယ်။ စိတ်တိုင်းမကျလို့audit ဝင်ရင် သူတို့ ရှေ့ မှာ အင်တာဗျူး ပြရပါတယ်တဲ့။ audit က လစာပေးတာ နည်းလို့ လား၊ စီတင်ဇင်၊ ဂရင်းကဒ်တွေက အရည်အချင်းပြည့်ဝရဲ့ သားနဲ့တမင်သက်သက် မခန့် ချင်တာလား သေချာစစ်တယ်။ သူတို့ စိတ်တိုင်းကျတော့ employment authorization ချပေးတာပါ. အဲဒါအောင်တော့လည်း ကိုတာရှိမရှိ စောင့်ရပြန်တယ်။ ကိုတာဆိုတာ ဂရင်းကဒ်လျှောက်ခွင့်ပြုတဲ့ ၃ သိန်းထဲမှာ တရုတ်ကို ၅ သောင်း လျှောက်ခွင့်ပြုရင် အဲဒီ ၅ သောင်းထဲမှာ ပါမှ လျှောက်ခွင့်ရတာပါ။ ကိုယ့်ဆူပါဗိုက်ဆာ တရုတ်မဆို ကိုတာမရသေးလို့စောင့်တာ ၂ နှစ်လောက် ရှိပါပြီတဲ့ ။
ဂရင်းကဒ်လျှောက်ဖို့ ရှေ့ နေခက ဒေါ်လာ ၄၅၀၀ အထက်၊ application fee ၊ ဘာကြေးညာကြေးနဲ့အနည်းဆုံး ဒေါ်လာ ၈ ထောင်ကနေ ၁ သောင်းလောက် ကုန်ပါမယ်တဲ့။ ဒါကတော့ ကျောင်းသားဗီဇာကနေ အလုပ်ဗီဇာ၊ ဂရင်းကဒ်ရဖို့ကြိုးစားရတဲ့ ဒုက္ခတွေပါ။ အိတ်ခ်ျဝမ်းဘီဗီဇာနဲ့အလုပ်ပြုတ်ရင် status မရှိတော့ဘဲ အိမ်ပြန်ရတယ်။ စင်္ကာပူက Work Permit ၊ Spass ၊ EP တို့အလုပ်ပြုတ်ရင် နေထိုင်ခွင့် ၁ လပဲ ခွင့်ပြုတာနဲ့ဆင်တူတယ်။ ဒီတော့ ဘယ်နိုင်ငံမှာပဲဖြစ်ဖြစ် ပီအာ၊ ဂရင်းကဒ်ရမှ နည်းနည်းစိတ်အေးရမယ်။အက်ဖ်ဝမ်းကျောင်းသားဗီဇာ၊ အိတ်ခ်ျဝမ်းဘီအလုပ်ဗီဇာတွေရဲ့မှီခိုဗီဇာအနေနဲ့အိမ်ထောင်ဖက်ကို ခေါ်လုို့ ရပေမဲ့ မှီခိုဗီဇာနဲ့အလုပ်လုပ်ခွင့် မရှိဘူး။ ခုပတ်မှာ ပြဋ္ဌာန်းလိုက်တဲ့ ဥပဒေသစ်အရ H-4 dependent spouses of H-1B nonimmigrants အိတ်ခ်ျဝမ်းဘီတွေရဲ့အိမ်ထောင်ဖက် မှီခုိုဗီဇာတွေကို အလုပ်လုပ်ခွင့် EAD ကဒ် ထုတ်ပေးတာတွေကို ၂၀၁၅ မေလမှာ စတင်ပါတော့မယ်။ ဆိုလိုချင်တာ ကိုယ့်လိုအိတ်ခ်ျဝမ်းဘီတွေရဲ့မှီခိုဗီဇာတွေက လျှောက်ခွင့်မရှိဘဲ ဂရင်းကဒ်လျှောက်၊ Employment Authorization ရ၊ I - 40 ရပြီးတဲ့ အိတ်ခ်ျဝမ်းဘီတွေရဲ့မှီခိုဗီဇာတွေပဲ EAD လျှောက်ခွင့်ရှိပါတယ်။ အက်ဖ်ဝမ်းကျောင်းသားဗီဇာကနေ အိတ်ခ်ျဝမ်းဘီအလုပ်ဗီဇာ၊ အလုပ်ဗီဇာကနေ ဂရင်းကဒ်ရတဲ့အထိ ခရီးကြမ်းက ရှည်ပါတယ်။ ဂရင်းကဒ်၊ စီတင်ဇင်တွေကို လက်ထပ်တဲ့သူတွေကျတော့ ဗီဇာအတွက် မပူရဘဲ EAD နဲ့အလုပ်လုပ်ခွင့်ရှိပေမဲ့ အလုပ်ရှာရ ခက်ပြန်တယ်။ အလုပ်ရတယ်ဆိုတာကလည်း အရည်အချင်း၊ အခွင့်အရေး၊ network အဆက်အသွယ်၊ အလုပ်အကိုင်ပေါမပေါ၊ ကြိုးစားအားထုတ်မှု၊ စိတ်ရှည်သည်းခံမှု၊ ကံနဲ့ လည်း ဆိုင်ပါသေးတယ်။
Senior and junior international female students in March 2011.
We (only4female students) became sister friends among 50+ male students.
MUM, Fairfield, Iowa, USA.
အိုင်တီကတော့ ဘယ်နို်င်ငံမှာမဆို အလုပ်ပေါပါတယ် လစာလည်း အီကို၊ အကောင်းတင်းထက် ကောင်းတယ်။ ယူအက်စ်ကျောင်းက အမ်ဘီအေသမားတွေဆို အလုပ်ရှာရခက်တယ်။ ယူအက်စ်မှာ အင်ဂျင်နီယာအလုပ်ပေါတယ်လို့ထင်တယ်။ အာခီတွေကတော့ အလုပ်ရှားတယ် အာရှကတော့ ခုမှဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်ခါစဆိုတော့ အဆောက်အဦးသစ်တွေ လိုတယ် စင်္ကာပူမှာ အာခီတွေ လစာကောင်းတယ်။ ယူအက်စ်ကျတော့ တိုးတက်ပြီးသား နိုင်ငံဆိုတော့ အဆောက်အဦးအသစ်တွေ မလိုဘူး။ ယူအက်စ်စီတီဇင် နာမည်ကြီးကျောင်းက မာစတာရထားတဲ့ အာခီတွေတောင် အလုပ်မရဘူးတဲ့။ ဒါပေမဲ့ အာခီတစ်ယောက် အမ်ဘီအေတက်ပြီး အာခီနဲ့အလုပ်ပြန်ရတယ်။ ကိုယ့်အသိအစ်မအာခီတစ်ယောက် အလုပ်ရှာရခက်လို့အိုင်တီတက်ရမလား၊ အကောင်းတင်းတက်ရမလား လာမေးလို့အကောင်းတင်းလို့ပြောလိုက်တယ်။ အိုင်တီက အကောင်းတင်းထက် လစာကောင်းပေမဲ့ ၃ လဆို နည်းပညာအမျိုးမျိုးထွက်နေတဲ့ အိုင်တီကို အမှီလိုက်နိုင်ဖို့ က ငယ်ရွယ်တုန်းတော့ ကောင်းတာပေါ့။ အဲဒီအစ်မက အသက် ၄၀ ကျော်ဆိုတော့ အပြောင်းအလဲ သိပ်မရှိတဲ့ အကောင်းတင်းပဲ ညွှန်းလိုက်တယ်။ သူက တသက်လုံး အာခီတက်လာတော့ဆိုတော့ အင်ဂျင်နီယာနဲ့အင်တီးရီးယားဒီဇိုင်းတို့သင်ချင်တာတဲ့။ ဖြစ်ချင်တာထက် ဖြစ်သင့်တာကို ဦးစားပေးရမဲ့ အချိန်ကိုး။ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအပိုင်းတွေကလည်း အလုပ်ရ လွယ်ပါတယ်။ ယူအက်စ်မှာတော့ ယူအက်စ်ဘွဲ့ ရမှ ခန့် ချင်တယ် အလုပ်ရှာရတာ ခက်တယ်လို့ညည်းတဲ့သူတွေကို အခွင့်အရေးရှိရင် ကျောင်းတက်စေချင်တယ်။ ကျောင်းတက်တယ်ဆိုတာ ပင်ပန်းတဲ့ အလုပ်ဆိုတော့ ဘယ်သူက ကျောင်းတက်ချင်ပါ့မလဲနော်။ ကျောင်းတက်တော့ အဲဒီနိုင်ငံက သဘောတွေ သိသွားမယ်၊ စီနီယာ၊ ဆရာတွေနဲ့ချိတ်ဆက်လို့network ကျယ်လာမယ်။ ယူအက်စ်မှာ network က အရေးကြီးပါတယ် အလုပ်မှာလုပ်နေတဲ့သူက ပို့ ပေးလာတဲ့ စီဗွီကို ပိုခန့် ချင်ကြတယ်။
ကျောင်းတက်တုန်းက ကံဆိုတာ မသိသာပေမဲ့ အလုပ်လျှောက်တဲ့အခါမှာ ကံဆိုတာ သိပ်သိသာတယ်။ တော်တဲ့လူတွေကတော့ အလုပ်ကောင်းကောင်းကို မြန်မြန်ဆန်ဆန် ရကြပါတယ်။ တချို့ ကျတော့လည်း ကိုယ့်လောက်မတော်ဘဲနဲ့အလုပ်ကောင်းကောင်းရသွားတဲ့အခါ ကံကွာတယ်လို့တွေးမိတယ်။ ဝို်င်းက အင်္ဂလိပ်စာစာမေးပွဲ တနိုင်ငံလုံးမှာ ဒုတိယရတော့ နာမည်ကြီးကျောင်းတွေထဲက တကျောင်းဖြစ်တဲ့ Institute of International Relations တက္ကသိုလ်ကို ရွေးလိုက်ပါတယ်။ အဲဒီကျောင်းက ဗီယက်နမ်တနိုင်ငံလုံးမှာ တစ်ကျောင်းတည်း ရှိတဲ့အပြင် တော်တဲ့ကျောင်းသားတွေပဲ လက်ခံပါသတဲ့။ တက္ကသိုလ်တက်ရင် နိုင်ငံခြားဘာသာတစ်ခု မဖြစ်မနေ သင်ရတော့ ဝိုင်းဟာ ပြင်သစ်စကားကို ကျွှမ်းကျွှမ်းကျင်ကျင် ရေးတတ်ပြောတတ်ပါတယ်။ full scholoarship ရလို့AIT (Asian Institute of Technology) ဘန်ကောက်မှာ တစ်နှစ်၊ ပြင်သစ်နိုင်ငံ ပဲရစ်မြို့ က ESCP Europe ကျောင်းမှာ တစ်နှစ်တက်ပြီး အမ်ဘီအေ ရခဲ့ပါတယ်။ အီးအက်စ်စီပီကျောင်းက ၁၈၁၉ မှာ တည်ထောင်ခဲ့ပြီး ကမ္ဘာပေါ်မှာ သက်တမ်းအရှည်ကြာဆုံး စီးပွားရေးကျောင်းဖြစ်ကာ ပါရီ၊ လန်ဒန်၊ ဘာလင်၊ မက်ဒရစ်၊ တူရင်မြို့ တွေမှာ ကျောင်းတွေ ရှိပါတယ်။ ကမ္ဘာပေါ်မှာ အရေးအကြီးဆုံး၊ တန်ဖိုးအရှိဆုံးကျောင်းတွေထဲက တစ်ကျောင်းပါတဲ့။ ဝိုင်းဟာ အီးအက်စ်စီပီကျောင်းထွက်ဖြစ်တာကို အင်မတန် ဂုဏ်ယူသလို ပါရီမှာနေခဲ့တဲ့ တစ်နှစ်ကို သူ့ တသက် မမေ့နိုင်ပါဘူးတဲ့ ။ ကျောင်းပြီးလို့အလုပ်ရှာကြတော့ ကျောင်းနေဖက် အိန္ဒိယလေးဟာ နယ်သာလန်က ချယ်ဗရွန် Chevron ရုံးချုပ်မှာ အလုပ်ရတော့ အားလုံး ဟာခနဲ ဖြစ်သွားကြတယ်။ အဲဒီကျောင်းသား တော်လားဆိုတော့ မတော်ပါဘူးတဲ့ ပြင်သစ်လို တတ်လားဆိုတော့ နှုတ်ဆက်တာလောက်ပဲ တတ်တယ်။ ယူအက်စ်ကျောင်းတုန်းကလည်း အဲဒီလို ဟာခနဲ ဖြစ်သွားကြဖူးတယ်။
ရာဂျက်ဆိုတာ နီပေါကျောင်းသားပါ သူငယ်ချင်းတွေကိုမငဲ့တကုိုယ်ကောင်းဆန်လို့ဆူနမ်က ခပ်ခွာခွာပေါင်းတယ်။ အမ်းထရူးနဲ့ အတူတူ တန်နက်ဆီပြည်နယ် မန်းဖစ်မြို့ က ဖက်ဒက် Fedex ရုံးမှာ အလုပ်ရတော့ ဆူပါဗိုက်ဆာကို သူဘာမှ မသိလို့လွယ်တာတွေကိုပဲ ခုိုင်းပါလို့ပြောသတဲ့။ ၂၀၁၂ ခရစ်စမတ်ပိတ်ရက် မေရီလန်းက ဆူနမ်တို့ ဆီ လာလည်တော့ ရာဂျက်တယောက် အိုင်ဘီအမ်မှာ အလုပ်ရနေတယ်လို့လင့်ခ်အင်မှာ တွေ့ လိုက်တယ်လို့ ပြောတော့ ရာမားက နင်မျက်စိရှမ်းတာ နေပါမှာတဲ့။ ရာဂျက်က အမ်းထရူးကို ပြောပြတော့မှ ကိုယ်တို့ မှာ ဟာခနဲ ဟင်ခနဲ ဖြစ်သွားတယ်။ မာစတာဘရိန်း မိုင်းဖန် အိုင်ဘီအမ်က ငါးကြိမ်အင်တာဗျူးမှာ သုံးခေါက်မြောက်မှာ ကျတယ်။ ကန်တက်ကီရုံးက စူပါဗိုက်ဆာ ဝီလီယမ်ဂရင်းက နှစ်ခေါက်မြောက်မှာ ကျတယ်။ သူ့ သူငယ်ချင်း အိန္ဒိယသားလေးက ကူညီတယ်ဆိုပေမဲ့လည်း ငါးကြိမ်အင်တာဗျူးကို သူ ဘယ်လိုဖြေပါလိမ့်။ ကွန်ထရပ်တောင် မဟုတ်ဘူး အိုင်ဘီအမ်မှာ အမြဲတမ်းဝန်ထမ်းတဲ့။ သေချာတာကတော့ ရာဂျက်က ကိုယ်တို့ လောက် မတော်ဘူး ဆိုတာပဲ။ ကနေဒါနဲ့ ကပ်လျက် အရမ်းအေးပြီး ခေါင်တဲ့ မီနီဆိုးတာပြည်နယ်မှာ သူတစ်ယောက်တည်းဆိုတော့ မေရီလန်းမှာ ကိုယ်တို့ သရဲလေးကောင် ခရီးသွားကြတာကို ဖေ့ဘွတ်ကနေ တွေ့ တော့ ရာဂျက်က ကိုယ်တို့ ကို အားကျသတဲ့။ ကိုယ်တို့ ကလည်း အယ်မလေး အိုင်ဘီအမ်မှာ အမြဲတမ်းအလုပ် ရလိုက်စမ်းပါ မီနီဆိုးတားမှာ တစ်ယောက်တည်းဖြစ်လည်း ဘာအရေးလဲ သူငယ်ချင်းအသစ်တွေ ရလာမှာပေါ့လို့ပြန်အားကျတယ်။ နာမည်ကလည်း အရေးကြီးပါတယ် ခေါ်ရခက်တဲ့ နာမည်ဆိုရင် အင်္ဂလိပ်နာမည် ရှိသင့်ပါတယ်။ ကိုယ်တို့ ကျောင်းက တရုတ်တွေဆို အင်္ဂလိပ်နာမည် ရှိကြတယ် ပိုင်းရှင်းချုန်း၊ ချောင်ရှောင်၊ ကျန်းကျိကျောက် အယ်မလေး ခေါ်ရခက်လိုက်ပါဘိ။ အီးမေးလ်လိပ်စာကလည်း ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဆန် သင့်ပါတယ် hellokitty123 မဖြစ်သင့်ပါဘူး။
I am lucky and grateful having good hearted, helpful, considerate, awesome, amazing, incredible and lovely3sister friends. My USA journey will not be smooth without their help.
နည်းပညာဖိုရမ်တွေမှာ ကိုယ်ပါဝင်ဆွေးနွေးတာ၊ ကိုယ့်ပရောဂျက်အကြောင်း ရေးထားတဲ့ ဘလော့တို့ ကိုလည်း အင်တာဗျူးသူတွေကို အသိပေးနိုင်ပါတယ်။ Linkedin မှာ ကိုယ်လုပ်ခဲ့တဲ့ ပရောဂျက်အကြောင်း၊ ဘာတွေသုံးပြီးရေခဲ့တဲ့အကြောင်း၊ ကိုယ့်ဆူပါဗိုက်ဆာက ရီကွန်မန်ဒေးရှင်း ပေးထားတာတွေ၊ ဗော်လန်တီယာလုပ်တဲ့အကြောင်း အသေးစိတ်ပါတဲ့ အကောင့်တစ်ခုရှိသင့်ပါတယ်။ အလုပ်ရှာရတာ ပင်ပန်းစိတ်ဆင်းရဲပါတယ်။ အင်တာဗျူးတွေ များများရတော့ အင်တာဗျူး အတွေ့ အကြုံ များများရတာပေါ့။ တခါတလေလည်း မဖြေနိုင်လို့စိတ်ဓာတ်ကျတာ ရှိမယ်၊ ဖြေနိုင်လို့စိတ်အားတက်ကြွရတာ ရှိမယ်၊ မကြိုးစားမိလေခြင်းလို့အားမလိုအားမရဖြစ်တာ ရှိတယ်၊ အင်တာဗျူးမရလို့အားငယ်ရတာ ရှိမယ်၊ ဘယ်တော့များမှ အလုပ်ရမှာလဲလို့ ဝမ်းနည်းမိတာ ရှိမယ်။ အလုပ်ရှာနေရင်တော့ တချိန်ချိန်မှာ ရလာပါမှာ ဘယ်အချိန်၊ ဘယ်နေရာ၊ ဘယ်လိုအလုပ်ရမယ်ဆိုတာတော့ ကံ၊ ကြိုးစားအားထုတ်မှုပေါ် မူတည်နေပါတယ်။ အင်တာဗျူးအတွက် အကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ခဲ့တယ်၊ ကြိုးစားအားထုတ်ခဲ့ပြီးပြီဆိုရင် ကျန်တာတွေကို ကံတရား လက်ထဲကို အပ်လိုက်ပါ။ ရည်ရွယ်မြတ်နိုး မျှော်လင့်တဲ့ အလုပ်တွေ လက်ဝယ်ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေ။
မတ် ၃၊ ၂၀၁၅။
PR ဆိုလို့ အသိတစ်ယောက် ISS တက်တုန်းက သူ တက်ခဲ့တဲ့နှစ်က PR ပေးတာ နောက်ဆုံးတဲ့ ။ ကံကောင်းလို့မှီလိုက်တယ်..သူက ။ သူတက်ပြီးတဲ့နောက်က batch တွေ ဘယ်သူလျှောက်လျှောက် reject ပဲ ။ နေရာလေးတစ်နေရာရဖို့မလွယ်ဘူးနော် ။